Технология XXI века. Опыт Новосибирской области — Картофельная Система
Ilaa hadda, noocyo kala duwan oo Dutch ah ayaa lagu beeray garoonka tijaabada. Iyada oo ku saleysan, cilmi-baarayaasha ayaa qorsheynaya in ay helaan xayawaanno ku habboon shuruudaha Siberiya. Tani waa baradhada qarnigii XNUMXaad, hal-abuurnimada Siberian waa hubaal, ugu dhakhsaha badan sidan (abuur ahaan, ma aha digriiga) waxaa lagu beeray doonaa meel kasta, laga bilaabo beeraha waaweyn ilaa guryaha xagaaga.
Dhadhanka badeecada kama dambaysta ah ee ka soo kordhay miraha ma liidato barandhada caadiga ah. Beeraleyda qudaarta waxay horey u sameeyeen qiimeyn organoleptik ah oo digriiga loogu talagalay soosaarka jiidashada, waxayna dejiyeen baradhada dhibco badan. Kala duwanaanshuhu waa Dutch, laakiin dadka deggan Michurin ayaa durbaba la shaqeynaya kuwa taranka ee maxalliga ah. Tusaale ahaan, baradhada Zlatka, oo laga abuuray Machadka Cilmi baarista ee Dhirta iyo Siraha ee Siberian, oo ah laan ka mid ah Machadka cilmiga sayniska iyo hidde SB RAS, ayaa sidoo kale ah tan ugu habboon ee sameynta chips. Marka loo eego barnaamijka gobolka, marka la gaaro 2024, beerta Michurinets waa inay keentaa 94 tan oo baradho la soo xulay oo noocyo kala duwan ah suuqa.
Waxaa qoray Nikita Zaikovа
Tags: baradho korayaChips baradhoGobolka Novosibirsk
AFG Qaranka. In ka badan 1500 ha ka yar baradhada
PepsiCo waxay ka bilaabaysaa dhismaha warshad magaalada Novosibirsk